အစေ့ထုတ်‌ပြောင်း | Myanmar Seed Information Portal
Home » Protocol » အစေ့ထုတ်‌ပြောင်း
၁။ သီးနှံအမည် - အစေ့ထုတ်ပြောင်း
၂။ စိုက်ပျိုးမည့် ရာသီ/ဒေသ/အကြိမ်
- မိုးရာသီ/တစ်ကြိမ်/ မြေပြန့်ဒေသ၊
၃။ အကွက်အရွယ်အစား - ၁၆.၅' x ၁၅'
၄။ စံထားမျိုး - တောင်သူများ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသောမျိုး
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား - ၂.၅' x ၉"
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - Randomized Complete Block Design(RCB)
(က) မြေပြင်ချိန် - တစ်ဧက - ယူရီးယားအိတ်ဝက်(၅၆)ပေါင်၊ တီစူပါတစ်အိတ်(၁၁၂)ပေါင်၊ ပိုတက်ရှ်အိတ်ဝက် (၅၆) ပေါင် နူန်း
(ခ) ၂၀-၂၁ရက်သား - တစ်ဧက - ယူရီးယားအိတ်ဝက် (၅၆) ပေါင်၊ ပိုတက်ရှ် ၁/ ၄ (၂၈) ပေါင်နူန်း
(ဂ) ၃၅-၄၀ရက်သား- တစ်ဧက - ယူရီးယားတစ်အိတ်(၁၁၂) ပေါင်၊ ပိုတက်ရှ် ၁/ ၄ (၂၈) ပေါင်နူန်း
(က) မြေပြင်ရာတွင် ထယ်ရေးနက်နက်၊ထွန်ရေး ညက်ညက် ရရှိ အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။
(ခ) တစ်ဧက အပင်ဦးရေ ၂၃၀၀၀မှ ၂၅၀၀၀ ထိရရှိအောင် တန်းကြား ၃၀ လက်မ၊ ပင်ကြား ၉ လက်မဖြင့် စိုက်ပါ။
(ဂ) အပင်ပေါက်ညီညာစေရန် မျိုးစေ့ကို (၂) လက်မ၊ (၂) လက်မ ခွဲ အနက်တွင် တညီတည်းစိုက်၍ ကြမ်းဖြင့် ဖုံးပေးပါ။
(ဃ) သဘာဝမြေသြဇာကို ရနိုင်သမျှထည့်သွင်းပါ။ဓါတ်မြေသြဇာ ထည့်သွင်းရာတွင်-
• မြေပြင်ချိန်တွင်တစ်ဧကလျှင်ယူရီးယား တစ်အိတ် (၁၁၂) ပေါင်၊ တီစူပါတစ်အိတ် (၁၁၂) ပေါင်၊ ပိုတက်ရှ်အိတ်ဝက် (၅၆) ပေါင်နူန်း တို့ကို ညီညာစွာကြဲပက် ထည့်သွင်းပါ။
• ၂၀-၂၁ ရက်သားတွင် တစ်ဧကလျှင် ယူရီးယားအိတ်ဝက် (၅၆) ပေါင်၊ ပိုတက်ရှ် ၁/ ၄ (၂၈) ပေါင်နူန်းထည့်၍ ငါးသွား သံထွန်(သို့) ထွန်တိုဖြင့် ကြားလိုက်ပါ။
• ၃၅-၄၀ ရက်သားတွင် တစ်ဧကလျှင် ယူရီးယား တစ်အိတ် (၁၁၂) ပေါင်၊ ပိုတက်ရှ် ၁/၄ (၂၈) ပေါင်နူန်း ထည့်၍ ဘောင် တင်ပေးပါ။
(င) အပင်ပေါက်စုံပြီးနောက် (၁၄)ရက်သား အတွင်းတစ်ကျင်းလျှင် တစ်ပင်ချန်၍ အပင်ခွဲပါ။
(စ) စိုက်ကွက်အတွင်း ရေမဝပ်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါ။ အထူး သဖြင့် စိုက်ပျိုး ပြီးသည် မှ တစ်လ အတွင်း ရေမဝပ်စေရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
(ဆ) အပင်ပေါက်စုံပြီးနောက် ၃၅-၄၀ရက်သား ဘောင်တင်ပြီးသည်အထိ ပေါင်းမြက်များ ကင်းစင် အောင်ပြုလုပ်ပါ။
(ဇ) ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်ချိန်၊ နို့ရည်တည်ချိန်တို့တွင် အစိုဓါတ်လုံ လောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင် စိုက်ခင်းအတွင်း ရေမဝပ်စေဘဲရေသွင်းပေးရမည်။
(စျ) စိုက်ပျိုးချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ အဖူးနို့ရည်တည်ချိန်တွင် လည်းကောင်း၊ ကြွက်ဝမ်းပူများ ဖျက်ဆီးတတ်သောကြောင့် စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင် ကြွက်အောင်းနိုင်သောနေရာများအား ရှင်းလင်း ပေးရန်နှင့်စိုက်ခင်းပတ်လည် ကြွက်ဆေးချပေးပါ။
(ည) ပြောင်းဖူးများ အခွံဖက်အဝါရောင်သမ်းစပြုပြီး ပြောင်းဖူးစေ့ အညှာကို လက်သည်းဖြင့် ခြစ်ကြည့်ပါက အမဲရောင်အမှတ် (Black Layer) တွေ့ရှိချိန်တွင် ရင့်မှည့်ပြီဖြစ်၍ စနစ်တကျ ဖက်ခွာ အခြောက်လှန်းပါ။
၂။ စိုက်ပြီး ၃ပါတ်သားအပင်အရေအတွက်
၃။ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (50% Tasseling)
၄။ ၅၀% မြိတ်ဆာထွက်ရက် (50% Silking)
၅။ အပင်အမြင့် (Plant Height, cm)
၆။ ဖူးထိအမြင့် (Ear Height, cm)
၇။ အပင်ယိုင်လဲမှု (Lodging)
၈။ ရောဂါကျရောက်မှု အခြေအနေ
၉။ ပိုးမွှားကျရောက်မှု အခြေအနေ
၁၀။ ဖက်လုံ/မလုံ (Husk Cover) (Score/ Grade)
၁၁။ ရိတ်သိမ်းသည့်အပင်အရေအတွက် (Harvested Plant)
၁၂။ ရိတ်သိမ်းသည့် အဖူးအရေအတွက် (Harvested Ear)
၁၃။ အဖူးပုပ်အရေအတွက် (Ear Rot)
၁၄။ အဖူးအလေးချိန် (Field Weight) (Kg)
၁၅။ အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်း (Moisture Percentage)
၁၆။ အဖူး (၅) ဖူးအလေးချိန် (Ear wt.) (Kg)
၁၇။ အစေ့ထွက်ရာနှုန်း (Shelling)
၁၈။ အဖူးအရှည် (Ear Length) (cm)
၁၉။ အစေ့တန်းအရှည် (Row Length) (cm)
၂၀။ အဖူးအချင်း (Ear diameter) (cm)
၂၁။ တစ်ဖူးပါအတန်း (No. of Rows, no)
၂၂။ တစ်တန်းပါအစေ့ (Kernels per Row, no)
၂၃။ အစေ့အမျိုးအစား (Seed Type)
၂၄။ အစေ့အရောင် (Seed Colour)
၂၅။ အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန် (1000 Seed Wt.)
၂၆။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)
၂ဂ။ ထူးခြားသော အရည်အချင်းလက္ခဏာများ
၂၉။ ထူးခြားသော အရည်အချင်းလက္ခဏာများ
စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ (Experimental Design)
မျိုးယှဉ်ပြိုင် စမ်းသပ်လိုပါက စမ်းသပ်ပုံစံ (RCB) ဖြင့် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးနိုင်ပြီး ဒေသဖြစ်ထွန်းမှု ကိုသာ သိရှိလိုပါက ရိုးရိုး စိုက်ကွက်ပုံစံ (Simple Trial) ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ (RCB) ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ သင်္ချာဗေဒနည်းဖြင့် စစ်ဆေး နိုင်ရန်အတွက် ကင်းလွတ်ဒီဂရီ (degree of freedom: df) အနည်းဆုံး ၁၂ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ မျိုး ၃ မျိုး ယှဉ်ပြိုင် စမ်းသပ်မည်ဆိုပါက ထပ်ပြုကြိမ် (၇) ကြိမ် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
ကင်းလွတ်ဒီဂရီ (degree of freedom: df) = (r-1) (t-1) = (3-1) (7-1) = 12
r = replication (ထပ်ပြုကြိမ်)
t = treatment or variety (စမ်းသပ်ချက် (သို့မဟုတ်) မျိုး
အကွက်ငယ်အရွယ်အစား (Plot Size)
အကွက်ငယ်တစ်ခုလျှင် တန်းကြား ၂.၅ပေ အရှည် ၁၆.၅ ပေရှိ စိုက်တန်း ၆ တန်း စိုက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်တန်းတစ်ခုအတွင်း တစ်ကျင်းနှင့် တစ်ကျင်း ၉လက်မ ခြား၍ တစ်တန်းလျှင် ကျင်းပေါင်း ၂၃ ကျင်း စိုက်ပျိုးရပါသည်။ အကွက်ငယ်တစ်ကွက် စိုက်ပျိုးရန် မျိုးစေ့ ပေါင်း ၉၀စေ့ ပါရှိ၍ တစ်ကျင်းလျှင် မျိုးစေ့ ၂စေ့နှုန်း စိုက်ပျိုး ရပါမည်။ ရိုးရိုးစိုက်ကွက်ပုံစံ (Simple Trial) ဖြင့် စိုက်ပျိုးမည် ဆိုပါက အကွက်ငယ် အရွယ်အစား (၀.၁) ဧက လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အပင်ပေါက်စုံပြီး နောက် ၁၀-၁၄ ရက်သားခန့်တွင် ကျင်းတစ်ကျင်း ၁ပင်ချန်၍ သားခွဲရပါမည်။
စံထားမျိုး (Local Check)
ထုတ်ဝေပြီး ရေဆင်းစပ်မျိုးများနှင့် ဒေသအတွင်း တောင်သူအများ စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသော အထွက် ကောင်းမျိုးများ (ဥပမာ-CP-888, ရေဆင်းစပ်မျိုး-၁၀) ကို ဆိုလိုပါသည်။
အကွက်ငယ် တစ်ခုစီအလိုက် ၇၅% အပင်ပေါက်စုံသောနေ့ကို မှတ်ယူရန် ဖြစ်သည်။
စိုက်ပြီးနောက် ၃ပါတ်အကြာတွင် အကွက်ငယ်တစ်ကွက်ရှိ အတွင်း တန်း ၂တန်း မှ စုစုပေါင်း အပင်အရေအတွက်ကို ရေတွက်ရန် ဖြစ်သည်။
၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (50% Tasseling)
အတွင်းတန်း ၂တန်းရှိ အပင်များ၏ ၅၀% အဖိုနှံမှ အလယ်ပန်းခိုင် ပန်းစပွင့်သော ရက်များကို ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။
၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (50% Silking)
အတွင်းတန်း၂ တန်းရှိ အပင်များ၏ ၅၀% မြိတ်ဆာထွက်သော ရက်များကို ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။
အပင်အမြင့် (Plant Height)
အတွင်းတန်း ၂ တန်းရှိ အပင်များထဲမှ အပင် ၅ ပင်ကို ကျဘမ်း ရွေးချယ်၍ တိုင်းယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ အပင်အမြင့်တိုင်းရာတွင် အပင်ခြေရင်း မှ အဖိုနှံကိုင်းဖြာနေသော အဆစ်နေရာအထိ အမြင့်ကို တိုင်းတာရန် ဖြစ် သည်။
ဖူးထိအမြင့် (Ear Height)
အပင်အမြင့်နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း အပင်အမြင့် တိုင်းသော ကျဘမ်း ၅ ပင်မှ တိုင်းယူရန်ဖြစ်သည်။ ပင်စည်အောက်ခြေရင်းမှ အဖူးထွက်သော အဆစ်အထိ တိုင်းရပါသည်။ တစ်ပင်နှစ်ဖူးဖူးသော အပင်များကို အပေါ်ဖူး ထွက်သော အဆစ်အထိ တိုင်းရပါမည်။
အမြစ်ယိုင်ခြင်း (Root Lodging)
စမ်းသပ်ကွက် မရိတ်သိမ်းမှီ တစ်ပါတ်ခန့်အလိုတွင် မျိုးအလိုက် အတွင်းတန်း ၂တန်း ရှိ အပင်များမှ ကောက်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမြစ်မှနေ၍ ၃၀ ဒီဂရီနှင့်အထက် ယိုင်လဲနေသော အပင်များကို ရေတွက်၍ မှတ်သားရန် ဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါကျရောက်မှုမှတ်တမ်းများကို မြိတ်ဆာထွက်ပြီးချိန်မှ အရွက်များ မခြောက်မှီ အချိန်အတွင်း ကောက်ယူရပါမည်။ မျိုးအလိုက် ရောဂါကျရောက်မှု အဆင့်အတန်းကို -
ကျရောက်တက်သော ရောဂါအမျိုးအစားကို သိပါက ရောဂါ အမျိုးအစားပါ ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုးမွှားကျရောက်မှုမှာ မျိုးကိုလိုက်၍ တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုး ကွာခြားမှုနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျရောက်မှု သိသာထင်ရှားစွာရှိက ကျရောက်သည့် ပိုးမွှားအမျိုးအစားသာ ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပါ သည်။ မျိုးအလိုက် ပိုးမွှားကျရောက်မှု အဆင့်အတန်းကို -
အဆင့် (၂) ပိုးမွှားအနည်းငယ်ကျ
အဆင့်(၅) ပိုးမွှားကျရောက်မှုအလွန်များပြား ဟု ဖော်ပြရန် ဖြစ် ပါသည်။
ဖက်လုံ/မလုံ (Husk Cover) (Score/ Grade)
စမ်းသပ်ကွက် မရိတ်သိမ်းမှီ ၁-၃ ပါတ်အလိုတွင် အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် (၁) ဖက်စရှည်၍ ဖက်သားကျစ်ပြီးအဖူးထိပ်ဖျားထိ ကျစ် လစ်စွာ လုံခြုံမှုရှိခြင်း
အဆင့် (၂) ဖက်စရှည်၍ ဖက်သား အသင့်အတင့်ကျစ်ပြီး အဖူး ထိပ်ဖျားထိ ကျစ်လစ်စွာ လုံခြုံမှုရှိခြင်း
အဆင့် (၃) ဖက်သားဖွ၍ အဖူးထိပ်ဖျားထိ ဖက်လုံခြင်း
အဆင့် (၄) ဖက်သားဖွပြီး အဖူးထိပ်ဖျားပေါ်နေခြင်း
အဆင့်(၅) ဖက်စတို၍ ဖက်သားဖွပြီး အဖူးထိပ်ရှိအစေ့များပေါ်နေ ခြင်း
ရိတ်သိမ်းသည့်အပင်အရေအတွက် (Harvested Plant)
စမ်းသပ်ကွက်ရိတ်သိမ်းစဉ်တွင် ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်း တန်း ၂ တန်းရှိ အပင်အားလုံး အဖူး ကပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မကပ်သည် ဖြစ်စေ ရေတွက်ရပါမည်။
ရိုးရိုးစိုက်ကွက်ပုံစံ (Simple Trial) ဖြင့် စိုက်ပျိုးပါက တစ်ဧက၏ ၁၀၀ ပုံ တစ်ပုံ အတွင်းရှိ အပင်အားလုံး အဖူးကပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မကပ်သည် ဖြစ်စေ ရေတွက်ရပါမည်။
မှတ်ချက် ။တစ်ဧက၏ ၁၀၀ပုံ တစ်ပုံ ဆိုသည်မှာ တန်းကြား ၂.၅ပေ၊ အတန်းအရှည် ၁၇၄ ပေ ရိတ်သိမ်း ရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရိတ်သိမ်းဧရိယာ = ၂.၅ ပေ x ၁၇၄ ပေ = ၄၃၅ စတုရန်းပေ
ရိတ်သိမ်းသည့် အဖူးအရေအတွက် (Harvested Ear)
အတွင်းတန်း ၂တန်းမှ ရိတ်သိမ်း၍ ရရှိသော အဖူးများကို ရေတွက် ရပါမည်။ တစ်ပင် ၂ ဖူး ဖူးသော အပင်များမှ သေးငယ်သိမ်ဖျင်းသော အဖူးအညှပ်များကို အဖူးရေတွက်ရာတွင်ထည့်သွင်း၍ ရေတွက် ရန်မလိုပါ။
ရိုးရိုးစိုက်ကွက်ပုံစံ (Simple Trial) ဖြင့် စိုက်ပျိုးပါက တစ်ဧက၏ ၁၀၀ ပုံ တစ်ပုံ အတွင်းရှိ အပင် များမှ အဖူးများကိုရေတွက်ရပါမည်။ တစ်ပင် ၂ ဖူး ဖူးသော အပင်များမှ သေးငယ်သိမ်ဖျင်းသော အဖူးအညှပ်များကို အဖူးရေတွက်ရာတွင် ထည့်သွင်း၍ရေတွက်ရန် မလိုပါ။
အဖူးပုပ်အရေအတွက် (Ear Rot)
စမ်းသပ်ကွက်ငယ်တစ်ကွက်စီမှ ပြောင်းဖူးများအား ဖက်ခွာပြီးနောက် အပင်လဲပြိုမှုကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ပိုးမွှားရောဂါကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ အဖူးများ အရည်အသွေးပြောင်းလဲပျက်စီး ဆွေးမြေ့နေသည်များကို ကြည့်ပြီး အဆင့်အတန်းခွဲခြားသတ်မှတ် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။
အဆင့် (၁) အပျက်အစီး လုံးဝမရှိပါ။
အဆင့် (၂) အဖူးရှိ ၁၀% သော အစေ့များ (အရောင်ပျယ်)
အဆင့် (၃) ၂၀ %
အဆင့် (၄) ၃၀ %
အဆင့် (၅) ၄၀ %
အဖူးအလေးချိန် (Field Weight) (Kg)
စမ်းသပ်ကွက်ရိတ်သိမ်းရာတွင် စမ်းသပ်ကွက်တစ်ခုတွင် စိုက်တန်း ၂တန်းစလုံး ကို ရိတ်သိမ်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ ရိတ်သိမ်းပြီး အတွင်းတန်း ၂ တန်းမှ ပြောင်းဖူးများကို ဖက်ခွာပြီး ချိန်တွယ်ရပါမည်။ မှတ်တမ်း ယူရာတွင် ကီလိုဂရမ်ယူနစ်ဖြင့် ဒဿမ ၂ နေရာ အထိ ယူရပါမည်။
ရိုးရိုးစိုက်ကွက်ပုံစံ (Simple Trial) ဖြင့် စိုက်ပျိုးပါက တစ်ဧက၏ ၁၀၀ ပုံ တစ်ပုံ အတွင်းရှိ ရိတ်သိမ်းပြီး ပြောင်းဖူးများကို ဖက်ခွါပြီး ချိန်တွယ်ရပါမည်။ မှတ်တမ်းယူရာတွင် ကီလိုဂရမ်ယူနစ်ဖြင့် ဒဿမ ၂ နေရာအထိ ယူရပါမည်။
အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်း (Moisture Percentage)
စမ်းသပ်ကွက်တစ်ကွက်စီမှ ပြောင်းဖူး ၅ ဖူးကို ကျဘမ်းကောက်ယူ၍ တစ်ဖူးစီမှ အစေ့အနည်းငယ်စီ ကိုအဖူးအလယ်ရှိ ကန့်လန့်ဖြတ်အလယ် ၂တန်းမှ ချွေယူကာ အစေ့များပေါင်းပြီး အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်း တိုင်း ကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာပါမည်။ ရိတ်သိမ်းကာစ ပြောင်းဖူးမျိုးများတွင် အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်း ၂၅-၃၀ ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတတ်ပါသည်။ အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်းတိုင်းကိရိယာ မရှိပါက နမူနာပြောင်းဖူး (သို့) ပြောင်းစေ့များကို နိုင်လွန်ပိုက်အိတ်တွင်ထည့်၍ နေပြင်းပြင်းတွင် ၃-၅ ရက် လှန်းပြီး သွားနှင့်ကိုက် ကြည့်ပါက ထောက်ကနဲမြည်သည့် ၁၃-၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင် ရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
အဖူး (၅)ဖူးအလေးချိန် (Ear wt.) (Kg)
စမ်းသပ်ကွက်ငယ်မှ ရိတ်သိမ်း၍ ရရှိသော အဖူးများမှ ကိုယ်စားပြု ၅ ဖူးအား အချိုးကျ (ကောင်း၊ သင့်၊ ညံ့) ရွေး၍ အလေးချိန် ချိန်တွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြု သော ယူနစ်မှာ ကီလိုဂရမ် ဖြစ်သည်။
အဖူးအရည်အချင်းလက္ခဏာများ (Ear Characters)
အဖူးအရှည် (Ear Length) (cm)
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီ တိုင်းယူရန် ဖြစ်ပါသည်။ အဖူးထိပ်မှ အူတိုင်အဆုံးထိ တိုင်းယူရန် ဖြစ်သည်။
အစေ့တန်းအရှည် (Row Length) (cm)
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီ တိုင်းယူပြီး ပျမ်းမျှတန်ဖိုး ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ အဖူးထိပ်မှ အစေ့တန်း ဆုံးသည့်ထိ ရှိသော အရှည်ကို တိုင်းတာရန် ဖြစ်သည်။
အဖူးအချင်း (Ear diameter) (cm)
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီ တိုင်းယူပြီး ပျမ်းမျှတန်ဖိုး ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းဖူး တစ်ဖူးချင်း၏ အလယ်တွင် တိုင်းတာရန် ဖြစ်သည်။
တစ်ဖူးပါအတန်း (No. of Rows, no)
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီရှိ အစေ့အတန်းအရေအတွက်ကို ရေတွက် မှတ်သားပြီး ပျမ်းမျှတန်ဖိုး ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်တန်းပါအစေ့ (Kernels per Row, no)
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော ၅ဖူးကို တစ်ဖူးချင်းစီတွင် ရှိသော အစေ့များအား ရေတွက် မှတ်သားပြီး ပျမ်းမျှတန်ဖိုး ဖော်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
အဖူးအလေးချိန်အတွက် ယူထားသော အဖူး (၅) ဖူး အား နေပူလှန်း၍ အခြောက်ခံပြီးမှ ချိန်တွယ် ရန် ဖြစ်သည်။
အစေ့ထွက်ရာနှုန်း= ---------------------------x ၁၀၀
(အူတိုင် + အစေ့) အလေးချိန်
မှတ်ချက် ။(အူတိုင် + အစေ့) အလေးချိန် နှင့် အစေ့အလေးချိန်တို့အား တိုင်းတာသည့်အခါ တစ်ဆက် စပ်တည်း ချိန်တွယ်မှတ်သားပြီးတိုင်းယူရန် ဖြစ်ပါသည်။
အစေ့အမျိုးအစား (Seed Type)
အစေ့အမျိုးအစားအား ထိပ်ခုံးနှင့် ထိပ်ခွက်ဟူ၍ ခွဲခြားမှတ်သားရန် ဖြစ်သည်။
အစေ့အရောင် (Seed Colour)
အစေ့အရောင်မှာ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်၊ အဖြူရောင်ဟူ၍ ခွဲခြားမှတ်သားရန် ဖြစ်သည်။
အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန် (1000 Seed Wt.)
အစေ့များအား အခြောက်ခံပြီးမှ အစိုဓါတ်တိုင်းကိရိယာဖြင့် အစိုဓါတ်တိုင်းပြီး အစေ့ ၁၀၀၀ ရေတွက်၍ ချိန်တွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ (အစိုဓါတ်တိုင်းကိရိယာမရှိခဲ့ပါက ပြောင်းဖူးစေ့အား သွားဖြင့် ကိုက်ကြည့်၍ ထောက်ကနဲမြည်သည့်အချိန်တွင် တိုင်းတာရန် ဖြစ်သည်။) အသုံးပြုသော ယူနစ်မှာ ဂရမ်ဖြစ်သည်။
Ft.wt x (100-M.C) x Shelling x Harvested Area
မှတ်ချက် ။ft.wt (အဖူးအလေးချိန်) နှင့် M.C (အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်း) တိုင်းတာသည့်အခါ တစ်ဆက်စပ်တည်း တိုင်းတာသည် ဖြစ်သည်။ ​
Harvested Area = 16.5' x 5' = 82.5 Square Ft
For one Acre = 43560 Square Ft / 82.5 Square Ft = 528
Harvested Area = 174' x 2.5' = 435 Square Ft
For one Acre = 43560 Square Ft / 435 Square Ft = 100